I-Dream Ukuhumusha: ukubona inkinobho ephusheni - kuthiwani?
Amathole amancane, njengabaningi, aphakathi kwezidalwa ezinandi kakhulu emhlabeni wethu. Futhi kuthiwani uma lezo zimfucumfucu, ezihlanjululwayo zitholwa kithi ephusheni? Ingabe iphupho elinjalo liyingxenye yemicimbi emihle noma enye into? Siphakamisa ukuphendula le mibuzo emibhalweni eminingi eyaziwayo futhi egcwele yosuku lwethu.
I-Dreamer Gustav Miller: ukubona inkinobho ephusheni - ngani?
Ngokusho kwencazelo yale ncwadi yephupho, uma ummeli wesifo obuthakathaka ebona ephusheni ephethe iphutha elimhlophe elimhlophe, ubeka engozini yokuwela emgodini obeka phansi. Kodwa ngenxa yokuqonda kwakhe nokuqonda, angakugwema imiphumela eyingozi. Amakhanda ahlanzekile ahlukumezekile axwayisa umphuphi ukuthi angenza into embi kakhulu kuye. Uma uphupha ukuthi izinyoka zibulala izinkanyana ezincane, bese zivusa izitha zakho, zakha izinhlobonhlobo zezingxabano ngokumelene nawe, ngenxa yalokho kuzolimaza kuphela.
Ibhuku lezincwadi zanamuhla: bheka inkinobho ephusheni
Ngokusho abalobi beliqoqo lokuhumusha amaphupho, izikhumba eziphuphayo zibikezela umphuphi uchungechunge lwezinkinga ezincane nokucasuka okuhambisana nabo. Ama- kittens amahle amhlophe enza njengesixwayiso sokuthi izitha zakho zilungiselela ugibe kuwe. Ama-kittens anombala anemibala futhi angcolile anikezela isenzo esithile esibi ngokumelene nawe.
Incwadi yasendulo yaseNgilandi iphupho: ukubona inkinobho ephusheni - kuthiwani?
Iphupho odlala ngayo ne-kitten, futhi ekuluma wena kanye nezikhalo, uxwayisa ukuthi umuntu oyithandayo uyoba nemvelo encane, ehlabayo futhi ehlabayo. Ngakho-ke, uma umshada naye, uyovame ukulangazelela impilo yakho engashadile.
I-Dreamer Maya: bheka i-kitten ephusheni
Ngokusho kolwazi oluvela kulolu bhuku, uma uphupha ngendwangu yombala okhanyayo, ngokushesha uzobhekana nokukhetha okunzima phakathi komsebenzi ophumelelayo noma izimiso zokuziphatha. Ukuphupha inkinobho emnyama - ngani? Iphupho elinjalo lithembisa umphuphi ukuphumula okusheshayo endaweni yokuhlanza noma ngaphandle, lapho othandekayo engakumemela khona.
I-Dream Razgadamus: ukuphupha kwe-kitten encane - yini?
Leli bhuku lephupho lithinta ama-kittens aphuphayo njengokwakheka kwemfihlakalo engaziwa, eyimfihlakalo nokuphelele yempilo yakho. Mhlawumbe manje yisikhathi sokufunda ngawe: qala ukuzindla, yoga noma ezinye imikhuba engokomoya. Uma intombazane ilungiselela ukushada ngesikhathi sokushada komshado ibona intombazane ebuthongweni bayo , ngakho-ke, ngeshwa, umshado wakhe awunakwenzeka ukuba ujabule, njengoba umyeni wakhe ebonisa ukuthi uyindoda encane, engxabano futhi engenangqondo.
Iphupho elivela ku-A kuya ku-Z: izinkenyane ephusheni
Uma uphupha amazinyane angenamakhaya angenamakhaya, futhi, futhi ushisekela emaqhinga abo, izitha zakho zizozilimaza kuphela. I-Fluffy little felines play ibonisa ukusondela kwenhlanhla nokuphumelela, futhi okuncane futhi okudabukisayo - ukuqala kwezinkinga ezincane nezinxushunxushu, okuzokwenza uhambisane nokucasula nokuthukuthela.
Sifunda incwadi ethi iphupho. Izikebhe, ezibonakala ephusheni - kusho ukuthini?
Kusihlwa igqoka isitayela Greek
Dunning-Kruger umphumela: kanjani thina wahlulela amakhono abo
Puppet Theatre "jester": izithombe kanye nokubuyekeza
Ukulungisa underfloor izandla siqu
Ukunqatshwa ifa bese bekhetha omunye indlalifa: isikhathi, ukukhishwa amadokhumenti, umthetho